Umhloli wobuxoki uPetunia Prado del Bosque upapasha ingqokelela yemibongo iLlueve. | Uncwadi lwangoku
UAna Lena Rivera Muñiz | | Imibongo
URosa Valle, umbhali woluhlu lwenoveli yolwaphulo-mthetho eneenkwenkwezi uPetunia Prado del Bosque, apho aboleka khona ingqokelela yakhe yokuqala yemibongo.
Imvula inesizi etyheli, unxunguphalo, utshintsho oluvela ngaphakathi, imimoya e-corvid, ukujika kothando kwaye bayenza ngohlobo lwemibongo. Umbhali kunye nentatheli evela eGijon Intili yaseRose uziqokelele wazidibanisa zaba zezokuqala imibongo, isihloko Iyanetha, kwaye ndiyazi uboleka umlingiswa wakhe oyintsomi uPetunia Prado del Bosque, Tunia, intloko yeeHomicides kwisikhululo samapolisa saseGijon, umlinganiswa ophambili wenoveli yolwaphulo-mthetho eValle eqale kunyaka ophelileyo ngokupapashwa Uya kuvakala phantsi kwamanzi.
Incwadi, ehleliweyo yasasazwa nguProducciones Norte, inentsebenziswano ebonakalayo ikhathuni UDeve Gil Gil, ntombi yombhali, oxoxayo, kule projekthi, njengomzobi.
Inxalenye yemibongo eqokelelwe ku Iyanetha inemvelaphi yazo izithuba Unyango lweeleta (www.terapiadeletras.es), ibhlog ebhalwe ngumbhali kwisidalwa sakhe uTunia.
Kwinoveli, ibhlog kaPetunia Prado del Bosque ibizwa ngokuba Umsindo kunye nokungaqhelekanga. Ezinye iivesi ziya kuchaza isavenge esitsha soMhloli wokuBulala, apho uRosa Valle asebenza khona ngoku, kwaye ezinye zizinto ezizimeleyo.
Iimvakalelo ezigcwele kwingqokelela yemibongo zizinto ezichaseneyo nezo zibhala zipeyinta kwiindonga zikaFacebook nakwezinye iinethiwekhi zentlalo., intetho emnandi ngolonwabo, ye Umntu omdala uPeter Pan, apho ubuqu, usapho, ubomi, kuluntu lwethu lokuthuthuzelwa kwabathobekileyo, zinikezelwa zixutywe ngepinki kunye nokugqibelela.
Uthando, ukungabikho, iintlungu, ukuhamba kwexesha ... Imixholo yemibongo yendalo iphela iyahlangana Iyanetha. Kunye nabo, ezinye ezikhoyo, ezinje ukwala ukwaluphala kunye nozwilakhe wezibophelelo kunye nemali, phakathi kwabanye.
Uyilo lopapasho, kubandakanya ikhava, ngumsebenzi kaBrezo Rubín.
Iyana, ingqokelela yokuqala yemibongo eqanjwe ngumhloli oyintsomi, uPetunia Prado del Bosque.
Iyanetha elandelayo iya kuboniswa NgoMgqibelo, nge-22 kaDisemba, nge-12.30: XNUMX ngokuhlwa, e-Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón (CCAI), kunye nembongi yase-Asturian UVanessa Gutierrez njengenkosikazi yeminyhadala.
Imvula iya kuboniswa Uyabona nge-12 kaDisemba kwivenkile yeencwadi iLa Pilarica; ivuliwe Ribadesella ngoDisemba 15 kwiNdlu yeNkcubeko; ivuliwe EGijon ngoJanuwari 2, kwivenkile yeencwadi iLa Buena Letra; kwaye kwi- Oviedo Nge-22 kaFebruwari kwivenkile yeencwadi eCervantes.
Intili yaseRose kunyaka ophelileyo wapapasha eyakhe yokuqala inoveli, Uya kuvakala phantsi kwamanzi, yohlobo olumnyama, olufunyenwe ngempumelelo luluntu olufundayo. Kwi-2018 ikwazisile I-bass yolwandle uJosefina, isikhephe esihamba ngephenyane kwi-SellaNgokusebenzisana kweKomiti yokuQuquzelela iNzala yeHlabathi yeSella (CODIS), ibali lesibini labantwana kolu thotho laqala I-Sea bass uJosefina, intshatsheli yevoli.
IValle ipapashe amabali kwii-anthologies ezinomxholo, ezinje Ubalisa iMediterranis (Ed. Constantí, 2018) kunye UVenus ebusuku (Ed. Rubeo, 2014), emva kokukhethwa kwayo kwiiMbasa zoNcwadi Qho ngo-2017 nakukhuphiswano lwe-XNUMX lwaMazwe ngaMazwe oMdaka UVenus ebusuku, ngokulandelanayo.
URosa Valle unesidanga kwiiNzululwazi ngezoLwazi (Ubuntatheli) kwiPontifical University yaseSalamanca (UPSA), isidanga sokuqala kwi-UNED kwi-Master in Business Management and Marketing kunye ne-CAP (Pedagogical Adaptation Course) kuLwimi noNcwadi yi-Oviedo KwiYunivesithi.
Inxalenye elungileyo yomsebenzi wakhe wobungcali ichithwe kwi Umatshini wokushicilela wase-Asturian (Ilizwi le-Asturias, El Comercio). Umsebenzi wakhe wobuntatheli kwicandelo le-Innovation kunye neTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano (ICT) wamzuzela u-2012 Ibhaso le-XII leJenali yoBugcisa UJose Antonio Coto.
Eziliqela iminyaka wayelungelelanisa uKhuphiswano lwaMabali amaFutshane lwaMazwe iLeopoldo Alas Clarín de Quintes (I-Villaviciosa-Asturias), ngoku eyi-jury.
Ngomsebenzi wobugcisa, ulutsha UDeve Gil Gil ufunda ukuzoba nomculo. Ukuqonda kwakhe kakuhle ngeepensile kuvela esemncinci kakhulu. Umsebenzi wakhe wegraphic ubonakalisiwe kwimiboniso yeqela kwaye wanikezela ukhuphiswano lwabantwana lokuzoba. Iyanetha Ngumsebenzi wakhe wokuqala njengombonisi wencwadi.
Kwimizekeliso, uDeva Gil Valle usebenzise ipensile, amalahle, i-watercolor, imakishi kunye ne-inki. Ngaphandle kwe Ingcuka ngongcwalazi, abathathe inxaxheba kwimiboniso yeqela, ezinye azipapashwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Imibongo » Umhloli wobuxoki uPetunia Prado del Bosque upapasha ingqokelela yemibongo iLlueve.